Nway, Author at Lifestyle Myanmar
တစ်ခါတစ်လေမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အားမရတာတွေ၊ စိတ်တိုင်းမကျတာတွေ၊ ဘာအကြောင်းပြချက်မှမရှိဘဲ ပင်ပန်းနေတာတွေ၊ ကိုယ်ဘဝမှာ ဘယ်လောက်ပဲ ကြိုးစား ကြိုးစား အောင်မြင်မှုရဖို့အတွက် ခြေတစ်လှမ်းနောက်ကျနေတာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အကြောင်းအရင်းကတော့ ကိုယ့်ကို ပင်ပန်းအားနည်းစေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ အကျင့်ဆိုးတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၁. ကတိမတည်ခြင်း ကတိတစ်ခုကို...
လူ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ရေဓာတ်က မရှိမဖြစ်လိုအပ်သလို ဝိတ်ချတဲ့နေရာမှာလည်း Exercise လုပ်တာ၊ အစားအသောက်တွေကို ပုံစံတကျစားသောက်တာတွေအပြင် ရေသောက်သုံးမှုကလည်း အရေးပါပါတယ်။ ရေများများသောက်ပြီး ရေနဲ့ပဲ ဝိတ်ချတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး ရေ ၂လီတာ (ရေသန့်ဘူးကြီး ၂ဘူး) သောက်သုံးပေးရပါမယ်။...
St. Valentine ဆိုတာဘယ်သူလဲ? ဘာကြောင့် ဖေဖော်ရီ ၁၄ ရက်နေ့ကို Valentine' Day လို့သတ်မှတ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့ ၁. ဖေဖော်ရီလ ၁၄ ရက်နေ့မှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ချစ်သူတွေ ချစ်တဲ့သူအချင်းချင်းတွေ ချောကလက်၊ ပန်းစည်း၊ သကြားလုံးစတဲ့ လက်ဆောင်တွေဖလှယ်ကြပြီး...
မိဘနဲ့သားသမီးဆက်ဆံရေးဆိုတာ အမြဲတမ်းတော့သာယာမနေပါဘူး။ စိတ်အခန့်မသင့်တိုင်း ကတောက်ကဆလေးတွေ ခဏ ခဏဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မိသားစုတစ်ခုနဲ့ တစ်ခုပုံစံတွေကလည်း မတူညီကြတဲ့အပြင် ဆက်ဆံရေးကောင်းပြီး ပြီးပြည့်စုံလွန်းတဲ့ မိသားစုဆိုတာမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်မိဘတွေက ချုပ်ခြယ်လွန်းတာကြောင့် ကိုယ့်စိတ်နဲ့ကိုယ် လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိတာမျိုး၊ အပေါင်းအသင်းတွေကြားမှာမျက်နှာငယ်တာမျိုး၊ အိမ်နဲ့တဖြည်းဖြည်းအဆင်မပြေတာမျိုးတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။...
ကိုယ်ကဘယ်လောက်ပဲ ယုံကြည်စိတ်ချထားရတဲ့သူမျိုးဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်အတွက်အမြဲတမ်း တိုင်ပင်ဖော် တိုင်ပင်ဖက်ဖြစ်နေရင်တောင်မှ ထုတ်ဖော်မပြောပြသင့်တဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ကိုယ်ကဘယ်လောက်ပဲပွင့်လင်းတဲ့သူဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်တစ်ယောက်ပဲ သိထားသင့်တဲ့ အရာတွေလည်းရှိပါတယ်။ တစ်ချို့အကြောင်းအရာတွေကို လွယ်လွယ်ပြောမိတဲ့အခါမှာ တစ်ဖက်လူကလည်း ကိုယ့်အားနည်းချက်ကိုသိသွားတဲ့အတွက် တစ်ခုခုဆိုပြဿနာတွေဖြစ် လာရင်ကိုယ့်ကိုပဲ အခက်တွေ့စေမှာပါ။ ဒါကြောင့်သူများတွေကို...
ချစ်သူမရှိသေးတဲ့သူတွေ FAတွေမှသာရရှိနိုင်မယ့် ပျော်ရွှင်မှု (၅)မျိုး
အခုချိန်ထိချစ်သူမရှိသေးလို့ ဘဝကြီးကတစ်ယောက်ထဲ အထီးကျန်နေတယ်လို့ ခံစားနေရတဲ့သူတွေရှိသလို ဘဝအတွက် အချစ်မရှိတာပိုကောင်းတယ်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ အချစ်ဆိုတာကလည်း အချိန်တန်မှ သူ့အလိုလိုရောက်ရှိလာတဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ အချစ်မရှိဘဲ တစ်ယောက်ထဲနေချင်တဲ့သူတွေ၊ ချစ်သူမရှိဘဲ တစ်ယောက်ထဲအထီးကျန်ပြီး အားငယ်နေတယ်လို့ခံစားနေရတဲ့သူတွေမှာသာရနိုင်မယ့် ပျော်ရွှင်မှု(၅)မျိုးကတော့… ၁. လွတ်လပ်တယ် လွတ်လပ်တယ်ဆိုတာ...
လူသားတိုင်း ကျန်းမာစွာနဲ့ အသက်ရှည်ရှည်နေနိုင်ဖို့အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အကောင်းဆုံးအရာတွေကတော့ နေရောင်ခြည်၊ အနားယူခြင်း၊ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊ အစားအသောက်ကို ချင့်ချိန်စားသောက် ခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုနဲ့ အပေါင်းအသင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲကမှ ‘အနားယူခြင်း’ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဥ်အောက်မှာပါရှိတဲ့ အချက်လေးတွေကို Sharing လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ‘အနားယူခြင်း’ဆိုတာ...